Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Arbaca Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Maanta Oo Arbaca Ah Ka Qoreen Wargaysyada Yurub.
July 3, 2019 Mahamoud Batalaale
Wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
Asalaamu calaykum, idilkiinba salaan akhristayasha sharafta lahow kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub ka qoreen maanta oo Arbaca ah.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa si rasmi ah u furmay July 1, waana waqtigii ay kooxuhu sugayeen in ay diwaan galin karaan saxiixyada cusub ee ay samaynayaan.
Kooxaha Yurub ayaa dagaal wayn ugu jira in ay suuqa kala iibsiga ka raadsadaan ciyaartoyda ay u arkaan in ay kooxahooda xooin u noqon karaan inta aan la gaadhin xili ciyaareedka cusub.
Shabakada Gool24 oo aad uga barateen in ay marakasta si joogto ah idiinla socodsiiso wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidigaha la kala doonayo.
FIIRO GAAR AH: Wararka Suuqa waxaa xaqiiqonimadooda iska leh hadba wargayska ku hor qoran ee xogta suuqa helay, sidaa daraadeed, shabakada Gool24 kama masuul aha xaqiiqinimada warkan maadaama oo aanu soo turjunay oo kaliya.
Wararka Suuqa Daily Mail
Real Madrid ayaa si wayn u doonaysa in ay heshiiska Pual Pogba qayb kaga dhigto Gareth Bale kaas oo Man United ku biiri kara haddii ay Madrid iyo United ka heshiiyaan iibka Pual Pogba oo bartilmaameedka kowaad u ah Los Blancos.
Tottenham ayaa diyaar u ah in ay iibiso difaaca dhexe ee Toby Alderweireld kaas oo ay diyaar ula tahay in uu AS Roma ku biiro si ay u helaan xidiga £4 milyan lagu qiimaynayo eet Nicolo Zaniolo.
Manchester United ayaa dalab ka gudbisay da’yarka xarunta Barcelona ka soo baxay ee Dani Olmo oo hadda ka tirsan kooxda Dinamo Zagreb iyo xulka da’yarta Spain ee 21 sano jirka ka yar. (Mail)
Wararka Suuqa Daily Star
Liverpool ayaa kooxda Barcelona xidhiidh kala samaysay sida lagu heli karo xidiga reer France ee Ousmane Dembele.
Christian Eriksen oo si wayn loola xidhiidhinayo Real Madrid iyo Man United ayaa kooxdiisa Tottenham ku wargaliyay in uu xagaagan baxayo balse uu qiimaha ku haboon ku bixi doono.
Wararka Suuqa The Sun
Bartilmaameedka kooxaha Manchester United iyo Manchester City ee Harry Maguire ayaa kooxdiisa Leicester City ku wargaliyay in uu diyaar u yahay in uu xagaagan kooxdiisa ka baxo.
Arsenal ayaa dalab £50 milyan ah kooxda Leicester City wax kaga waydiisay Harry Maguire, waana dalab £35 milyan gini ka hooseeya inta ay Leicester xidigan ku qiimaynayso.
Manchester City ayaa u dhaw in ay kooxda Tottenham ku garaacdo xidiga £40 milyan gini lagu qiimaynayo ee Nathan Ake, kaa oo ka tirsan kooxda Bournemouth.
Nemanja Vidic ayaa soo laabasho qiiro leh ugu qayb kaga noqon kara shaqaalaha tababarka Old Trafford si uu qayb uga noqdo shaqalaaha Ole Gunnar Solskjaer ee United.
Manchester United iyo kooxda Werder Bremen ayaa xiisaynaya difaaca 18 sano jirka ah ee Nathan Collins kaas oo ka tirsan kooxda heerka labaad ee Stoke City.
Wararka Suuqa Daily Mirror
Crystal Palace ayaa go’aan ku gaadhay in ayna Arsneal ka iibin Wilfried Zaha sababtoo ah in ay aaminsan yihiin in Gunners ay xidigan deganaansho la’aan ku abuurayso.
Atletico Madrid ayaa xiisaynaysa gool dhaliyaha kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette waxayna doonayaan in ay ku buuxiyaan booska uu banayn doono Antoine Griezmann oo la filayo in uu Barcelona ku biiri doono.
Wararka Suuqa Telegraph
Leicester City ayaa Manchester United u sheegtay in ay haddii ay doonayaan adeega Harry Maguire in ay bixiyaan ugu yaraan £90 milyan gini waxayna soo diiday dalabkii 70 ka milyan ahaa.
Chelsea ayaa heshiis waqti dheer ah la gaadhay xidiga kooxdeeda ee Ruben Loftus-Cheek, wuxuuna saxiixi doonaa heshiis ugu yaraan shan sanadood ah oo uu todobaadkii ku qaadan doono £150,000 kun oo gini.
Riix 2 si aad wararka suuqa u sii akhrisato